काठमाडौं – वाराणसीको सडक किनारमा एकजना वृद्ध भिखारी बसेर माग्ने गर्थे । सडक आउजाउ गर्ने मानिस या त उनलाई पैसा दिन्थे या केही खाना दिन्थे । यही मागेको पैसा र खानाले उनको जीवन चलिरहेको थियो...बाँकी
काठमाडौं – हामीले यो कुरा विर्सनु हुँदैन कि हामीहरू सानो, ठूलो कुनै पनि कामको लागि हरबखत तयारी अवस्थामा रहनुपर्दछ । कुनै पनि अवसर प्राप्त गर्न प्रतीक्षामा बसिएको हुन्छ तर त्यो अवसर आफूले थाहै नपाउने गरी...बाँकी
काठमाडौं – जीवनमा सबै मानिसहरु सफलता चुम्नका लागी निरन्तर यात्रामा लगनशील भएर लागीरहेका हुन्छन्। कोही असफल भएर पनि निरन्तर धैर्य लाइ प्यारो साथी बनाएर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। आज हामी सफलता चुम्नका लागि...बाँकी
काठमाडौं– तपाईलाई्र अचम्म लागेको होला सफलताको साथी पनि हुन्छ र भनेर । मैले त के भन्छु भने सफलताको पनि साथी हुन्छ। त्यो साथी को हो ? कहाँ छ ? आउनुहोस् त्यसको बारेमा व्यापक चर्चा गरौं...बाँकी
काठमाडौं – एकपटक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन एउटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाझ आफ्नो मन्तव्य दिन निम्त्याइएका थिए। निर्धारित समयमै आइन्स्टाइन विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा उपस्थित भए । सभाकक्षका कुर्सी खचाखच भरिएका थिए। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि विद्यार्थीसम्म सबै बडो उत्सुकताका साथ...बाँकी
काठमाडौं – अमेरिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति बाराक हुसेन ओबामा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुन् । उनी अमेरिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बनेका थिए । उनका भनाइहरू प्रेरणादायी छन् । बाराक ओबामाका जीवनोपयोगी भनाईहरु १. सहयोगको लागि अनुरोध गर्नु भनेको...बाँकी
काठमाडौं – तपाईले एउटा संकल्पै गर्नुपर्दछ संकल्प गर्नुहोस् । त्यो संकल्प के भने मैले काम गर्दा बीचमा जस्ता अप्ठ्याराहरू आए पनि खुशी साथ स्वीकार गर्छु । सफलताको लागि बोली: व्यक्ति जस्तो छ त्यस्तै कुराहरू उसको...बाँकी
महात्मा गान्धीका प्रेरणादायी विचारहरू
काठमाडौं – महात्मा गान्धी भारतका एक कुशल राजनेता थिए । अझै भन्नु पर्दा उनी विश्वले नै चिन्ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व पनि हुन् । अङ्ग्रेजहरूलाई भारतबाट फिर्ता पठाउन सफल उनी सत्य र अहिंसाका पुजारी मानिन्छन् ।...बाँकी
प्रेरक प्रसंगः आफ्नो कामको लागि आफै तयार हुनुपर्दछ
सफलताको लागि अवसर छोप्न जान्नु पर्दछ किनभने अवसर भनेको श्रीमती वा श्रीमान्सँग मिल्ने जस्तो कुरा होइन यो त कुनै पनि दिन, घण्टा, मिनेट वा सेकेन्डमै हामीबाट भाग्न सक्छ । काठमाडौं –हामीले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन...बाँकी
सफलताको लागि ब्रह्म मुहूर्तको प्रयोग गर्नुहोस्
काठमाडौं – यदि तपाइ साँच्चै सफल हुन चाहनुहुन्छ भने बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्नुहोस्। जो व्यक्ति ब्रहम मुहूर्तमा उठ्छ त्यस्तो व्यक्ति अरूभन्दा अगाडि हुन सक्छ। कतिपय मान्छेहरू विहानमा यतिसम्म अल्छी गरेर सुत्छन् कि बिहान आठ बजि...बाँकी
काठमाडौं – नेपाली बजारमा आज (मंगलबार) सुनको मूल्य घटेको छ । सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार...